ကွယ်လွန်သွားပီဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီး အတွက် လုပ်ပေးချင်တဲ့ဆန ္ဒတစ်ခုကို မသေခင်ဖြည့်ဆည်းခွင့်ရခဲ့တာကြောင့် ပျော်ပြီး ငိုခဲ့ရဖူးတယ် ဆိုတဲ့ Russell – Shwe Likes
Russell ကေ တာ့ မော်ဒ ယ်လ်တစ်ေ ယာက် အဖြစ်သာမ က သရုပ်ေ ဆာင်တ စ်ယော က်အဖြစ်ပါ အောင်မြင် ခဲ့သူတစ်ယော က်ပဲဖြစ်ပါတ ယ်။ Russell က မကြာသေးခ င်အချိန်က လည်း သူ့ရဲ့အ ချစ်ရ ဆုံးမိခင်ကြီးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာမို့ အခက်ခဲဆုံးအ ချိန်တွေ ကို ဖြတ်သ န်းနေတာ ပဲဖြစ် ပါတယ်။
Russell က သူ့ရဲ့မိခ င်အတွက် သူလု ပ်ပေးချင်တဲ့အရာတ စ်ခုကို လုပ်ပေးခွင့်ရခြဲ့ ပီး ပျော်ရွှင်ငိုခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို အခုလိုပဲ ပြောပြလာ ပါတယ်။
“မနှစ်က အမေ့အ တွက် မရှိတဲ့ကြားက Mini Condo တိုက်ခန်းေ လး အရစ်ကျနဲ့ ဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ ပျော်ပြီး ငိုခဲ့ရသေးတယ် …. အမေ 🥺 အခုတော့ ပိုအေးချ မ်းတဲ့ ကောင်းကင်ဘုံ မှာ ပျော်ပျော်နေပါနော် 🙏” ဆိုပြီး ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ကြားက အမေ့အတွက် မီနီကွန်ဒိုလေး တစ်လုံး အရစ်ကျနဲ့ဝယ်ေ ပးနိုင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း သတိတရပြောလာပါတယ်။
Russell ကတော့ အမေကိုသိ တ တ်လွန်းတဲ့ သားလိမ္မာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အမေလိုအပ်သမျှတွေကို ဖြည့်ဆည်းေ ပးတတ်သူ တစ် တစ်ယောက်ပဲဖြ စ်ပါတယ်။ Russell ရဲ့မေမေလည်း အခုဆိုရင် အေးချမ်းတဲ့ဘုံဘ ဝကိုရောက်ရှိနေလော က်ပြီထင်ပါတယ်။ Source: Russell’s fb
Russell ေက တာ့ ေမာ္ဒ ယ္လ္တစ္ေ ယာက္ အျဖစ္သာမ က သ႐ုပ္ေ ဆာင္တ စ္ေယာ က္အျဖစ္ပါ ေအာင္ျမင္ ခဲ့သူတစ္ေယာ က္ပဲျဖစ္ပါတ ယ္။ Russell က မၾကာေသးခ င္အခ်ိန္က လည္း သူ႔ရဲ့အ ခ်စ္ရ ဆုံးမိခင္ႀကီးကို ဆုံးရႈံးခဲ့ရတာမို႔ အခက္ခဲဆုံးအ ခ်ိန္ေတြ ကို ျဖတ္သ န္းေနတာ ပဲျဖစ္ ပါတယ္။
Russell က သူ႔ရဲ့မိခ င္အတြက္ သူလု ပ္ေပးခ်င္တဲ့အရာတ စ္ခုကို လုပ္ေပးခြင့္ရျခဲ့ ပီး ေပ်ာ္ရႊင္ငိုခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းကို အခုလိုပဲ ေျပာျပလာ ပါတယ္။
“မႏွစ္က အေမ့အ တြက္ မရွိတဲ့ၾကားက Mini Condo တိုက္ခန္းေ လး အရစ္က်နဲ႔ ဝယ္ေပးနိုင္ခဲ့လို႔ ေပ်ာ္ၿပီး ငိုခဲ့ရေသးတယ္ …. အေမ 🥺 အခုေတာ့ ပိုေအးခ် မ္းတဲ့ ေကာင္းကင္ဘုံ မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနပါေနာ္ 🙏” ဆိုၿပီး ပိုက္ဆံမရွိတဲ့ၾကားက အေမ့အတြက္ မီနီကြန္ဒိုေလး တစ္လုံး အရစ္က်နဲ႔ဝယ္ေ ပးနိုင္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း သတိတရေျပာလာပါတယ္။
Russell ကေတာ့ အေမကိုသိ တ တ္လြန္းတဲ့ သားလိမၼာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အေမလိုအပ္သမၽွေတြကို ျဖည့္ဆည္းေ ပးတတ္သူ တစ္ တစ္ေယာက္ပဲၿဖ စ္ပါတယ္။ Russell ရဲ့ေမေမလည္း အခုဆိုရင္ ေအးခ်မ္းတဲ့ဘုံဘ ဝကိုေရာက္ရွိေနေလာ က္ၿပီထင္ပါတယ္။ Source: Russell’s fb
ချစ်စဖွယ်ပုံစံ အဆန်းလေးနဲ့ ကျက်သရေရှိရှိ လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်ရဲ့ ပုံရိပ်များ
ကြည့်မိသူတိုင်း ကြည်နူးအားကျစရာ လိုက်ဖက်လွန်းနေတဲ့ Project K အဖွဲ့ဝင် Morris ရဲ့ မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲ ဗီဒီယိုလေး